विचाराधीन मुद्दामा इजलासबाहिरै फैसला ठोक्ने यी चार न्यायमूर्तिलाई अवहेलनाको मुद्दा किन नलगाउने ? - || वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक ||
विचाराधीन मुद्दामा इजलासबाहिरै फैसला ठोक्ने यी चार न्यायमूर्तिलाई अवहेलनाको मुद्दा किन नलगाउने ?
२०७७ पुष २५, शनिबार १८:५२:००
चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले अदालतमा विचाराधीन संसद विघटनको मुद्दामा इजलासबाहिरैबाट ‘फैसला’ ठोकिदिएका छन् । बेलाबेला राजनीतिक प्रोपोगाण्डामा उत्रिइरहने यी चारैजना आफ्नो पूर्वहैसियत बिर्सेर पुनः तर्कको सिँगौरीमा उत्रिएका छन् ।
चार–चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको एकैस्वरमा वक्तव्य आएपछि यो देशका हरेक कोठाचोटामा अराजकता पुगिसकेको पुनः प्रमाणित भएको छ । उच्च मर्यादा र धैर्यतामा रहनुपर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु नै अराजक राजनीतिकर्मीहरुको भीडमा मिसिएर वक्तव्यबाजीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुको यस हर्कतले न्यायिक विवेकमाथि प्रश्न र दबाब मात्र सिर्जना गरेको छैन, अदालतमा बहस गर्नुको औचित्यलाई समेत समाप्त पारिदिएको छ ।
त्यसै पनि संसद विघटनको मुद्दालाई पक्ष–विपक्षले भाषण र वक्तव्याबाजीको विषय बनाउँदा अदालतमाथि अनावश्यक दबाब परिरहेको छ । कतिपयले आफ्नो पक्षमा फैसला नभए ‘देख्लास्’ भन्ने शैलीमा अदालतबाहिर भीड जम्मा गरिरहेका छन् । देशव्यापी जनभावनालाई भड्काउने सिलसिला जारी छ । त्यसमाथि न्यायिक प्रक्रिया र अदालतको रक्षाकवच बन्नुपर्ने वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरु आफ्नो प्रचारका लागि मौका यही हो भन्ने शैलीमा इजलासमै शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरुको यस बाहुबली शैलीको प्रतिरोधमा उत्रिनुपर्ने पूर्वन्यायमूर्तिहरु सस्तो लोकप्रियताका लागि थप अराजकतामा उत्रिएका छन् ।
इजलासमा कानुन व्यवसायीले र बाहिर जिम्मेवार राजनीतिक नेताहरुले न्यायाधीशमाथि दबाब मात्र सिर्जना गरेका छैनन्, धम्कीसमेत दिइरहेका छन् । उनीहरुको यो धम्कीको भाषाले मुलुकमा कानुनको राज होइन, संस्थागत रुपमै गुण्डातन्त्र मौलाएको भान हुन्छ । त्यही भीडमा न्यायपालिकामा दाह्रीजुँगा फुलाएकाहरु मिसिन अस्वाभाविक, आश्चर्यजनक र आपत्तिजक छ ।
केही वरिष्ठ भनिने वकिलहरुले आफ्नो राजनीतिक आग्रह र व्यक्तिगत कुण्ठा ओकलेर इजलासमा बसेका न्यायाधीशको मानमर्दन र व्यक्तिगत आक्रमण गरे । जब इजलासमा न्यायाधीशमाथि यस तहको आक्रमण हुन्छ भने कसरी स्वतन्त्र निर्णय आउँछ ? कसरी संविधान र न्यायको रक्षा हुन सक्छ ? यस्तो बेला इजलासबाहिर रहेका न्यायमूर्तिहरु न्यायाधीशको पक्षमा बोल्नुपर्ने हो । न्यायाधीशको विवेकमा शंका नगर्न अपिल गर्नुपर्ने हो ।अझ अहिले वक्तव्यबाजी गर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु नै अहिले इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुका नियुक्तिदाता हुन् । हामीले ठीक न्यायाधीश नियुक्ति गरेका छौँ, त्यसकारण पनि यिनले ठीक फैसला गर्नेछन् भनेर ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले भन्न सक्नुपर्ने हो । तर, आफूले नियुक्ति दिएका न्यायाधीशको इजलासमै मानमर्दन हुँदा बाहिर बसेर ताली बजाउने यो शैली विधिको शासन र न्यायिक स्वतन्त्रताका निम्ति घातक छ ।
जब पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु नै अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अब यसै फैसला आउनुपर्छ भनेर मोर्चाबद्ध भई सडकमा उत्रिन्छन्, अनि गैरन्यायिक क्षेत्रबाट अदालतलाई सहयोग कसरी पुग्छ ? वास्तवमा पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरुको चार सदस्यीय जुन मोर्चा बनेको छ, तिनका हर्कतलाई मान्यता दिने हो र कुनै कानुनी कदम नचाल्ने हो भने यो देशको न्यायप्रणाली नै विघटन गरिदिए हुन्छ । संविधानका धारा र कानुनका दफाको व्याख्या गर्ने जिम्मा बाटाघाटामा जो बोल्न सक्ने र बोल्न जान्ने छ, अनि जोसँग बाहुबल पनि छ, उसैलाई जिम्मा लगाइदिए हुन्छ ।
जब पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुबाटै न्यायिक प्रक्रियाप्रति अविश्वास र आशंका बढाउने गरी सस्तो लोकप्रियताको खेती हुन थाल्छ, त्यहाँ अदालतले निर्भयताका साथ कठोर भएर निर्णय दिन कसरी सक्छ ? अदालतले हेर्ने भनेको नियम, कानुन र संविधान हो । अदालतले आत्मसात् गर्ने भनेको न्यायिक मान्यता, मूल्य र परम्परा हो । तत्कालका लागि कतिपयलाई मन नपर्न सक्छ । केहीको जीवनमा त्यसले नकारात्मक असर पनि पर्न सक्छ । तर, जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि न्यायलाई जिउँदोजाग्दो राख्ने काम न्यायाधीश र न्यायिक प्रक्रियामा सम्बद्ध पक्षहरुको हो । तर, अदालतकै मानो खाएर न्यायाधीशको मानमर्दनमा पूर्वन्यायाधीशहरु उत्रिइसकेपछि अब अदालतमाथि जसले जेजस्ता आरोप बर्साए पनि भयो ।
विकसित घटनाचक्रलाई हेर्ने हो भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु नैतिकतालाई बलि चढाएर वक्तव्यबाजी गर्न किन उत्रिए भन्ने तथ्यको गृह्यसम्म पुग्न सकिन्छ ।
एक, सस्तो लोकप्रियताको ढोङ पिटाएपछि आफ्नो सबै हर्कतको छोप्न सकिन्छ भन्ने स्थापित भ्रम नेपालको एउटा वर्गमा छ। न्याय क्षेत्रमा मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्र र व्यापारिक क्षेत्रमा पनि यस्तो चलाखीले राम्रै काम गरेको पाइन्छ ।
दुई, यी चारैजना प्रधानन्यायाधीश पनि दूधले नुहाएका होइनन् । गम्भीर विवादहरुको पोखरीबाट उद्धार गरिएका हुन् । उनीहरुको सम्पत्ति मात्र हेर्ने हो भने पनि त्यसको मूल सफा छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अब अख्तियारमा एउटा निर्भीक नेतृत्व आउने हो भने यी सबै जनाको सम्पत्ति छानबिन हुन सक्नेछ र नयाँ कानुनले त्यसका निम्ति बाटो खोलिदिएको छ । अहिलेदेखि नै कोकोहोलो मच्चाउन थालेमा भोलि ‘लोकतन्त्र पक्षधर’माथि अख्तियार लगाएर पूर्वाग्रह साँधियो भनेर जनता गुहार्न पाइनेछ ।
तीन, यी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले अवकाश पाएर घर जाँदै गर्दा महँगा र राम्रा ब्रान्डका नयाँनयाँ गाडी पनि लिएर गएका छन् । त्यो फर्काउनुपर्छ भनेर बारम्बार ताकेता हुँदा पनि वास्ता गरेका छैनन् । एक थान वक्तव्य बाहिर फ्याँकिदिएपछि मान्छेहरु त्यतै अल्मलिन्छन् र गरीब जनताको रगतपसिनामा आफ्नो मोजमस्ती चलिरहन्छ ।चार, बाहिर जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि भित्र यी कुनै पनि न्यायमूर्तिको नैतिक धरातल बलियो छैन । आफू राम्रो, विद्वान् र लोकप्रिय देखिनका निम्ति बेलाबेला यिनीहरुले अरुको ध्यान तान्ने कुनै न कुनै हर्कत गरिरहेका हुन्छन् । त्यसो त बेलाबेला चर्चामा छाइरहने, अरुको ध्यान आफूतिर तानिरहने एउटा रोग पनि हुन्छ । त्यो रोगबाट न्यायाधीशहरुको एउटा पंक्ति नराम्रैसँग ग्रसित छ । त्यस्तै रोगका लक्षणहरु पछिल्लो विज्ञप्तिमा पनि देख्न सकिन्छ ।
जे होस्, विचाराधीन मुद्दामा न्यायमूर्तिहरुको वक्तव्यबाजी अदालतको अवहेलनाका निम्ति पर्याप्त प्रमाण हो । यदि अदालतको स्वतन्त्रता, न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षताप्रति कोही संवेदशील र ज्युँदा नागरिक छन् भने यथाशीघ्र मानहानिको मुद्दा चलाउनुपर्छ । बाहिरबाट निवेदन परेन भने पनि अदालत स्वयंले फाइल उठाएर मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ र चारैजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई कठघरामा उभ्याएर बयान लिनुपर्छ । अदालती प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने, अवरोध गर्ने वा विचलित तुल्याउने अधिकार अदालतभित्र वा बाहिरका, पूर्व वा बहालवाला कुनै पनि पदाधिकारी वा जनसामान्यलाई छैन । यी चारजनाको वक्तलाई मान्यता दिने हो वा त्यसप्रति मौनता देखाउने हो भने यो नजिर बन्नेछ र भविष्यमा योभन्दा पनि विकृत अभ्यासहरु देखापर्नेछन् ।